Xisbiga Midnimo Qaran oo talooyin usoo jeediyey RW cusub ee Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xisbiga Midnimo Qaran oo talooyin usoo jeediyey RW cusub ee Soomaaliya
Mareeg.com: Xisbiga Midnimo Qaran ee uu hogaamiyo Dr. C/raxmaan Macalin C/llaahi “Baadiyow” ayaa soo dhaweeyey codka kalsoonida ee baarlamaanka Soomaaliya maanta siiyey RW cusub, Cumar C/rashiid Cali Sharmarke.
Dr. Baadiyo ayaa talooyin dhowr ah usoo jeediyey RW Cumar C/rashiida, waxaana talooyinkaasi ahaayee sidan:-
1. Dhaqangelinta dastuurka kumeelgaarka ah oo kala qayaxaya awoodaha Golaha Wasiirada, Baarlamaanka, Garsoorka iyo Madaxweynaha anaga oo u aragna in Xad-gudub kasta oo lagu sameeyo awoodaha dastuurka horseedi karo khilaaf soo cusboonaada iyo isqabqabsi aan laheyn dhamaad.
2. Dhismaha xukuumad loo dhanyahay oo aay kawada qeyb galaan dhamaan dhinacyadii isku khilaafay mooshinkii laga keenay Ra’isulwasaare hore Cabdiweli Sheikh axmed .
3. Mudnaanta koobaad in lasiiyo la dagaalanka musuqmaasuqa, ninjecleysiga, laaluush siyaasadeedka baahay, kuwaas oo dhamaantood khatar ku ah nolasha iyo jiritaanka dawladnimada Soomaaliya.
Madaxweynaha Somaliland oo dhaqangeliyey xeerka Codbixiyaasha